EN877 Grey Cast Iron Pipes Factory, Suppliers - China EN877 Grey Cast Iron Pipes Vagadziri.
Ductile Iron Kukodzera
Manhole Kavha uye Chimiro
Iyo SML hapana-hub yakakanda simbi yekudonha mapaipi uye zvigadzirwa zvinosangana nemhando yeBSEN877, DIN19522, ISO6594. Izvo zvigadzirwa zviri 100% zvinodzoreredzeka uye zvinodzoreredzeka, zvine mutsindo wekutumira, moto chiratidzo, hunhu hunoburitswa uye hunopokana. Izvo zvinoshandiswa zvakanyanya kusimudzira mvura kubva kuzvivakwa, madhiramu, marara uye vent. Zvakare mvura yemvura systerm yakaiswa kunze kwezvivakwa uye yakavigwa system pasi pevhu inogona kupihwa.
Iyo EN877pipes kunze kwekubatira iri tsvuku, epoxy ine ukobvu hweisingasviki 70um. Mukati mekudhiraivhi yeroxy resin ine ukobvu hwemakumi mairi. Kana mukati uye kunze kune anopfuura 120μm poda epoxy kuturika neruvara tsvuku.
Zvimiro zvacho zvakare zvakatsvuka mukati nekunze, mvura epoxy resin yakadarika 70um, uye huputi epoxy hwapfuura 120um ukobvu.
Magetsi mapaipi emvura e BML ndeye bhiriji drain system.
Kunze kwekubika: BML mapaipi anotakura svina zinc inodziya yeanenge 40um cm ukobvu (290g / ㎡), pamusoro peizvozvo achapfutira sirivha yegrey epoxy resin inonamira kanokwana 80um.
Mukati mekupfekera ndiyo yakafanana epoxy resin 120um yakafanana neSML pombi.
KML drainage pombi uye zviguti zvinoshandiswa kune mafuta-ane marara mvura yemadzimba ekhishini uye zvimwewo zvivakwa.
Kunze kwekuturika: Takura chipanje chakaputira chekuputira neasal density yemaminitsi 130g / ㎡, uye pamusoro peiyo epoxy chifukidzo cheshoma 70um.
Mukati mekuturikidzana mune orche-ruvara epoxy.Akaviri denderedzwa resin epoxy ine huwandu hwakazara ukobvu 240um.
KML fittings inosanganiswa mukati uye kunze nehupamhi hwepamusoro efaxy yeinosvika zana nemakumi matatu.
Magetsi mapaipi eDBL ari pane EN 877, kuti kushandiswa kwemapombi eSML ekuisirwa pasi pevhu.
Kunze kwekubika: TML mapaipi anotakura inosvina zinc inodziya nehuputi hwe130g / ㎡, pamusoro pekuti pane jira rebrown kana dzvuku.
Mukati mekupfekera: Iko kunamatira ndeye orche ruvara, epoxy 120um.
Fittings: Epoxy poda inodzika tsvuku, zana nemakumi mairi.
Grey Iron Socket uye Spigot Pressure Pipes ave achishandiswa kwenguva yakareba neyekuvaka indasitiri seyakavimbika uye isingadhuri dhiriini dhizaini. Ivo vari zvinoenderana nechiyero cheBS4622, BS437 uye BS416. Iyi mipendero yesimbi grey inogadzirwa necentrifugal yakakanda mumasimbi simbi, Iwo iwo maratidziro achave akaomeswa kana mutema epoxy resin.
BS4622 Sinle Spigot yakakanda simbi yekudonha pombi neyakagadzika rabha mhete inosangana, DN100-DN700, Kureba: 1830mm, 4110mm uye 5120mm
BS437 Sinle Spigot yakakanda simbi yekudonha pombi neyakagadzika rabha mhete inosangana. DN75-DN225 yakareba 1830mm + -5mm
BS416 Imwechete Spigot yakakanda simbi yekudonha pombi D50-DN150
1.Tensile Simba> 150 N / mm2
2.Hydrostatic Pressure (3.45 bar ye15 sec.)